Ogaden News Agency (ONA) – OYSU/Norway oo shirkoodii sanadlaha ahaa aan u kala hadhin
OYSU/Norway oo shirkoodii sanadlaha ahaa aan u kala hadhin
29-Jan-12-Oslo- Waxaa caasimadda Oslo ee dalka Norway, caawa fiidkii lagu soo gabagabeeyey, kulankii sanadlaha ahaa ay yeesheen Ururka Dhalinyaradda iyo Ardayda Ogadeenya (OYSU-Norway), laguna qabtay xarunta shirarka ee SOS ku leedahay magaaladda.
Shirkan oo ahaa mid isagu ka duwanaa qaababkii hore ee kulamadu u dhici jireen, wakhtigana aad loo ilaaliyey, ayna ka soo qeyb-galeen xubno cusub oo uruka ku soo biiray, ayaa lagu furay sida caadada ah Aa’yado kamid ah quraanka kariimka ah. Ka dib waxaa maykarafoonka lagu soo dhaweeyey Xoghayeha ururka OYSU, ee dalka Norway, Mudane Haaruun Cabdulaahi, oo goobta ka jeediyey war-bixin ku saabsan waxqabadka ururka OYSU-Norway sameeyey sanadkii 2011 ee dhamaaday iyo isbadaladda la filayo inuu ku talaabasado ururka OYSU sanadka cusub.
Waxaa goobta shirka lagu soo dhaweeyey kana hadlay xubnihii OYSU Norway, matalayey ee ka qeyb-galay shirkii dhalinyaradda ee Germany, kuwaas oo sharaxaad ka bixiyey sida uu shirku ahaa iyo qaabkii ay uga qeyb galeen iyo waliba waxayaabihii ay ka soo faa’iideen. Waxaana xubnaha goobta soo xaadiray loo soo bandhigay go’aamadii dhaxal-galka ahaa ee shirkii Germany lagu qaatay iyo Qorshaha Wax-qabad 2012 (Action Plan-ka 2012) ee larabo in laga hirgeliyo wadanka Norway.
Waxaa sidoo kale, war bixin ku saabsan dhaqaalaha, qaab cilmiyeysan goobta uga soo jeediyey, Madax dhaqaalaha OYSU-Norway, Mudane Abdiwali Soomane, oo qeexay inay dadaal balaadhan ugu jiraan sidii loo laba jibaari lahaa dhaqaalaha ururka OYSU, arinta oo ay ka qeyb-qaadan doonaan dhamaan xubanha iyo taageerayaasha ururka dhalinta OYSU.
Hogaanka abaabulka iyo Arimaha Bulshadda ee urarka OYSU-Norway Mudane Yusuf, oo aan wareysi la yeelanay caawa ayaa tibaaxay muhiimada gaarka ah ee isku xidhka iyo ka qeyb-gelinta dhinac walba ah ee dhalinyaradda S. Ogadeenya ee dalkan ku nool u leedahay midnimada bulshadeena iyo halganka loogu jiro sidii looga xoreyn lahaa gumeysiga Woyaanaha ee haysta dhulka Ogadeenya.
Mudane Hassan Wali Ali, oo ah madaxa Xidhiidhka Caalamiga ah iyo Xalinta Xurgufaha ee OYSU-Norway, ayaa dhankiisa ku nuux-nuuxsaday dadaaladda balaadhan ee loogu jiro sidii loo balaadhin lahaa ururka islamarkaasna loogu sameyn lahaa saaxiibo badan halganka xaqa ah ee Ogadeeniya ka socda.
Dhinaca kale, waxaa cashiro qiimo badan goobta kulanka ka jeediyey Xoghayaha Jaaliyadda Norway, Mudane Khaliif oo kulanka ka akhriyey cashir aad u qiimo badan oo ku saabsanaa “Xidhiidhka iyo Wada-shaqeynta”; mowduucan oo la filayo inuu wax badan ku biirin doono tayadda wada-shaqeyneed ee ka dhaxeysa ururka dhalinta OYSU-Norway. Mudanaha ayaa sheegay in looga baahan y dhalinyaradu sidii ay isaga dhisi lahaayeen dhinac walba, si ay u noqdaan kuwo tayo leh kana midho-dhaliya ujeedooyinka loo aas-aasay ururka OYSU.
Sidoo kale, Mudane Mohamed Dheeg oo ka socday Hogaanka A. Dibadda (HAD), ayaa goobta ka jeediyey hadal qiimo leh, isagoo si weyn u bidhaamiyey kaalinta lagama maar-maanka ah ee dhalinyaradu ku leedahay halganka iyo masiirka ummadda Ogadeenya.
Gabagabadiina waxaa shirka hadal isugu jiray waano iyo dardaaran ka soo jeediyey Godoomiyaha Jaaliyadda S. Ogadenia ee dalka Norway, Mudane Abdirahman Sh. Yusuf oo bogaadiyey dadaaladda istara haya ee ay sameynayaa dhalinyarada OYSU-Norway waayaddan dambe, tan oo buu yidhi tusaale fiican u noqon karta dadyawga kale.
Kulankan ayaa ahaa mid guul ku dhamaaday, iyadoo dhalinyaradii ka soo qeyb gashay shirkanna ay ku sheegeen inuu ahaa mid taariikhi ah.